အိန္ဒိယ: CBI အဆိုပါ FCRA ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့အမှု၌အနီးကပ်တွဲဖက် Deepak Talwar ရပ် | အိန္ဒိယသတင်း - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ "အိန္ဒိယ: CBI အဆိုပါ FCRA ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့အမှု၌အနီးကပ်တွဲဖက် Deepak Talwar ရပ် | အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: CBI အဆိုပါ FCRA ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့အမှု၌အနီးကပ်တွဲဖက် Deepak Talwar ရပ် | အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗဟိုဗျူရို ( CBI ) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် Yasmeen Kapoor က, ကော်ပိုရိတ် lobbyist တစ်ဦးအနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ၏ဖမ်းဆီးခြင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ Deepak Talwar လက်ရှိတွင်တပ်စွဲ Tihar ၏အကျဉ်းထောင် နိုင်ငံခြားအလှူငွေအပေါ်တစ်ဦးအမှုတရား၏က၎င်း၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု (စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း) (FCRA) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်။
တစ်ဦးကအကြီးတန်းအရာရှိတဦးကအနီးကပ် IWC ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ IANS ကိုပြောသည်: "ကျနော်တို့ကယနေ့ Yasmeen Kapoor ကအဖမ်းခံရပြီ။ " Yasmeen အဆိုပါအလှူငွေပေါ်ပညတ်တရား၏အမှုအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးအေဂျင်စီ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ဆက်စပ်. ဖမ်းဆီးခဲ့ 2017 ၏နိုင်ငံခြား (စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း), အတာဝန်ရှိသူကပြောသည်။
သူအေဂျင်စီလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ရူပီး 2017 ၏ကုဋေပမာဏလက်ခံရရှိနိုင်ငံခြားအကူအညီရှိခြင်းတို့အတွက် NGOs များ Talwar ဆန့်ကျင် 90 ကိစ္စတွင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည် ပြည်ပမှာတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထို့နောက်အခြားရည်ရွယ်ချက်များမှလမ်းကြောင်းပြောင်းခဲ့သည့် (FDI) ။ ။
အဆိုပါ CBI အဆိုပါအန်ဂျီအိုပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေစိုက်အဲယားဘတ်စ် SAS ကပြောသည်နှင့်ဗြိတိန်ထုတ်လုပ်သူ MBDA ဒုံးကျည်များအင်တာနေရှင်နယ်, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပညာရေးနှင့်ဆက်စပ်သောအစပျိုးများအတွက်အန်ဂျီအိုအကြောင်းကို 90,72 သန်းရူပီးအားပေးပြီးမှ, ဒါပေမယ့်ခဲ့သည် ဒီပိုက်ဆံနောက်ပိုင်းတွင်ဂုဏ်သတ္တိများဝယ်ယူရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ။
ဤ NGO အဖွဲ့အစည်းသည်, 84 သိန်းထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိသုံးဇိမ်ခံကားများဝယ်ယူ "မှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်များ, မှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်များ, မှားယွင်းသောကုန်ကျစရိတ်, ကွံကုန်ကျစရိတ်, အပါအဝင် FCRA အက်ဥပဒေအများအပြားပါပြဋ္ဌာန်းချက်များ, ချိုးဖောက်နှင့်အတူနေဖြင့်ငွေပေးချေမှုကိုတရားစွဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ် ပြည်ပမှာလာရောက်လည်ပတ်သူ Talwar များအတွက် NGO အဖွဲ့, ရန်ပုံငွေများအားသာချက်အိန္ဒိယ၏တည်ထောင်သူများစီးပွားဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောငွေပေးချေမှုစေရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ "
အာဏာတည်ခြင်း၏ညွှန်ကြားမှု၏တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအေဂျင်စီအသေးစိတ် IWC မှာ Kapoor ကပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
သူအေဂျင်စီ Tihar အကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိ Talwar မေးမြန်းပြီးနောက်, Kapoor က၏ပါဝင်မှုအပေါ်အပုဒ်ခဲ့ဟုဆိုသည်။ Talwar Tihar အကျဉ်းထောင်တွင်အတွက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသည်လက်ရှိတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကဒီနှစ် 30 ဇန်နဝါရီလအပေါ်ဒူဘိုင်းကနေပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်နှင့်တစ်ဦးအမှုအတွက်ပညာရေးကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရ ငွေကြေးခဝါချမှု .
Talwar လည်း Air ကိုအိန္ဒိယအမြတ်အစွန်းလမ်းကြောင်းအပေါ်ကိစ္စရပ်များမျှဝေနိုင်ငံခြားပုဂ္ဂလိကလေကြောင်းလိုင်းများအမတ်နေရာမျက်နှာသာအတွက်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများတွင်ကြားခံအဖြစ်ပြုမူဖို့ ED အားဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည် .
ဝန်ကြီး, '' အစာစားခြင်းနှင့်ချုပ်ထား
အဆိုပါ 11 13 စက်တင်ဘာလကနေ Abidjan ဖို့နိုင်ငံတကာငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများ၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏အစည်းအဝေး
BGR - Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု 20 $ မတ် Alexa ကျော်သိမ်းယူကားများ, အဘို့ကို Wi-Fi ကို 19 $: Echo Dot $ 6.50 တိုးချဲ့